Sifaadka Qofka Muuminka Ah | Himilo Media Group
Sifaadka Qofka Muuminka Ah
waxaan ku bilaabay magaca Alle swt,mahad oo dhana isagaa iska leh ,nabadgelyo iyo naxariisina nabigeena korkiisa ha ahaato.
walaalayaal qofka muslimka ahi waxa uu leeyahay sifooyin lagu garto si taxane ah halkan waxaan ugu soo gudbin doonaa sifooyinka muslimka.
1-Salaada ayuu ilaashadaa qofka muslimka ahi.
salaadu waxay leedahay fadli aad u badan oon la soo koobi karayn waxaana ka mid ah fadligeeda.
-cibaadooyinka kale oo dhan Rasuulkeena SCW waxa lagu faral yeelay isagoo dhulka jooga laakiin salaada markii lagu faral yeelayey samada korkeeda ayaa lagaga soo faral yeelay, taasina waxay inoo sheegaysaa ama ina tusaysaa qiimaha ay leedahay salaadu iyo fadligeeda.
-salaadaha faralka ahi waa shan laakiin xaga ajjarka waa 50 salaadood.salaadiiba waxay u dhigantaa 10 salaadood.
-fadligeeda waxa ka mid ah. qofka ilaashada salaadaha waxay u noqonaysaa Nabad gelyo (najaat) iyo burhaan.
-fadligeeda waxa ka mida :qofka ayay ka maydhaa denbiga iyo xumaanta .Rasuulku wuxuu waydiiyey saxaabadiisii :ka warama haddii qof gurigiisa albaabkiisa uu ku yaalo webi biyihiisu saafi yihiin oo uu maalintii ku maydhanayo shan goor wax uskag ama wasakh ahi miyay ku hadhayaan?! saxaabadii ayaa ku jawaabay maya waxba ku hadhi maayaan! wuxuu yidhi Rasuulkeenii scw sidaa waxaa la mid ah shanta salaadood Illaahay ayaa denbiga idinkaga maydhaya oo derejona idinku siinaya.
-fadligeeda waxaa ka mid ah: salaadu waa raaxo ,salaadu waa indho qabawsi .Rasuulku wuxuu yidhi scw:salaada waxaa la iiga dhigay indho qabowsi iyo raaxo.
-salaadu waa caafimaad. waxay yidhaahdeen culumadu salaada qofka tukada wuu ka caafimaad badan yahay qofka aan tukan waayo maalintii wuxuu samaynayaa jimicsi salaadu waa jidh dhisto.
-fadligeeda waxaa ka mid ah:waa ta aynu ku liibaanayno mu’adinku wuxuu yidhaahdaa (xayya calal falaax ) liibaanta u kaalayaay.
-fadligeeda waxaa ka mid ah:salaadu waa hantidii uu inoo dardaarmay rasuulkeenu scw markii uu dhimanayey wuxuu lahaa (assalaah ,assalaah)waar salaada ogaada waar salaada ogaada.
-fadligeeda waxaa ka mid ah :murugta ayay dawo ka tahay salaadu Rasuulkeenu scw marka arin kediso ahi ku yimaado wuxuu odhan jiray( Bilaalow Bilaalow salaada eedaan ).
-waxaa ka mida fadligeeda :waxay kaa durkinaysaa xumaanta iyo faxshaa’iga.
-fadligeeda waxaa ka mida: salaadu iyadaaba kuu ducaynaysa sida Rasuulkeenu inoo sheegay scw qofka salaada si fiican ugu diyaar garooba ee si fiican u tukada salaada tidhaaha :Illaahow u xafid adoonkan siduu ii xafiday.
weli wuu inoo socdaa fadliga salaadu walaal bal dib aan isku eegno inaan fadligaas salaada shaqaysanay iyo inaynu fadligaas dayacnay.
Illaahayna khayrka ha ina waafajiyo.